About Us - Yueqing Hengsheng Refrigeration Co., Ltd
304Stainless vy Distributor
Distributor singa fototra
90 ° varahina kiho
M varahina telo
T varahina telo
U varahina kiho
Welded sodina Fittings
Y varahina telo
Copper sodina Fittings
Rano mikoriana Distributor
2 fomba mikoriana Distributor
3 fomba mikoriana Distributor
4 fomba mikoriana Distributor
6 fomba mikoriana Distributor
Yueqing hengsheng refrigeration Accessories mpiara., LTD. dia miorina ao amin'ny tanàna amoron-tsiraka misokatra - Ao songhu faritra indostrialy, leqing tanàna, tanànan'i Wenzhou, Zhejiang faritanin'i, ny orinasa specializes amin'ny famokarana isan-karazany ny fanangonana mpankafy coil rano loha, rano sy ranon-javatra dispensers dispensers. (Distributor), brazed mpiray, Sodium cuprate, Gas hetra fiangonana, U - tahaka ny fantsom-samihafa fepetra arahana, ary varahina tahaka ny fantsom famerana mari-pana, etc.The orinasa efa lasa ny ISO 9001 rafitra taratasy fanamarinana kalitao, ary nihatsara hatrany amin'ny ISO 9001 Standard, ireo mpampiasa manompo amin'ny fo manontolo toy ny mahazatra.
Nanomboka ny fananganana tamin'ny 1996, ny orinasa dia nandroso hatrany nampiditra fitaovana, nitombo matihanina sy ara-teknika manokana, ary nampahafantatra mandroso fomba fitantanana. dia manana fitaovana maro tratra, multifunctional hydraulic gazety, sodina Bender, polisher, fanamainana, lathes ny fepetra arahana isan-karazany, sy ny amin'izay isan'ny maso lathes punches.
Ny orinasa dia misesy nanome fanohanana isan-karazany andianà vokatra ho an'ny Panasonic, Sanyo, mitondra, Dunham roimemy, Tsinghua tongfang, RC, gaokelian, Haier, Bailette sy ireo orinasa malaza. Ary fanondranana any Eoropa, Amerika, Azia Atsimo Atsinanana ary ny hafa firenena sy ny faritra.
Ny orinasa dia mifanaraka amin'ny fitsipiky ny kalitao aloha, manao ny marina aloha, ary mikendry amin'ny "manenjika Excellence, mpanjifa voalohany, niorina tamin'ny anatiny sy miatrika izao tontolo izao", ary vonona ny hiara-miasa amin-kitsimpo amin'ny mpiara-miasa aminy avy amin'ny fari-piainana rehetra sy hampivelatra miara- .
No. 18, Zhao Xian Road Songhu lndustrial Zone, Yuecheng Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province, Sina